Cyber Security အကြောင်းသိကောင်းစရာ - ICT Consulting Firm Cyber Security အကြောင်းသိကောင်းစရာ - ICT Consulting Firm
Cyber security ဆိုတာဘာလဲ?
Business organization တွေမှာ cyber security ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ access, reputation တွေနဲ့ data တွေကို protect လုပ်ထားခြင်းပါ။ 2020 ရဲ့ February လမှာ cyber crime ပေါင်း 623 million အထိရှိ‌နေခဲ့ပါတယ်။ cyber security က အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်မတို့တွေ သတိထားမိတာတော့ ဆယ်စုနှစ်မကရှိနေပါပြီ။ လက်ရှိလည်း အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ လေ့လာချက်တွေအရဆို organization ၁၀ ခုမှာ ၄ ခုက Cyber attacks တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါသတဲ့။ အဲ့လို attack လုပ်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ ? စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်
တိုက်ခိုက်ခံရပြီဆိုတည်းက ပထမဦးဆုံးကြုံတွေရမှာက ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းရခြင်းပါ။ မိမိရဲ့ client တွေကိုတောင် ဆုံးရှူံးရနိုင်ပါတယ်။ client တွေက မိမိရဲ့ personal data တွေ financial details တွေ အပ်နှံထားရတာကြောင့် တစ်ခါလောက် breach ဖြစ်သွားတာနဲ့ client တွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့တောင်မလွယ်တော့ပါဘူး။
(၂) များပြားလွန်းတဲ့ ငွေကြေးဆုံးရှူံးမှုများ
Hacker တဦးဟာ မိမိရဲ့ organization ကို ဝင်ရောက် နိုင်ဖို့နဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ကြိမ် hack ခံရပြီဆိုတာနဲ့ မိမိ organization မှာရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေ၊ personal information တွေကို စိတ်ကြိုက် ရောင်းချမှာ ခြယ်လှယ်‌‌မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ponemon Institute ရဲ့ လေ့လာချက်အရ hack ခံရပြီးနောက်မှာ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအတွက် mitigating cost က $69,0000 လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ အလတ်စား စီးပွားရေးတခုအတွက်ဆိုရင် $1 million အထိရှိပါတယ်။
Hack ခံရပြီးနောက်မှာ management level ဟာ ချိုးဖောက်ခံရခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ အမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အလားတူထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရေးယူရတော့မှာပါ။ မိမိတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်း‌တွေအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိလာတော့မှာပါ။
U.S National Cyber Security Alliance ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ၆၀ ရာနှုန်းဟာ cyber attack နဲ့ကြုံတွေရအပြီးမှာ နာလန်ထူနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက် ၆ လအတွင်း ပိတ်သိမ်းရပါတော့တယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရင်တောင် mitigating cost ကအရမ်းများတဲ့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ operational structure တွေကိုပြောင်းလဲရပါတော့တယ်။ service ရဲ့ quality ဟာအရင်နဲ့မတူအောင် ကျဆင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ အထက်ပါ အကျိုးဆက်တွေကြောင့် cyber security ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ထပ်ပြောဖို့လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ organization အတွက် cyber security ကောင်းဖို့ အစွမ်းကုန် ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။